Myat Shu - 2012 June
You are here : Myat Shu » Archives for June 2012
စွမ်းအင်နှင့်ကျင့်ဝတ် (သားသို့ပေးစာ – ၆)
Published By Myat Shu On Thursday, June 21st 2012. Under မျက်ရှု, ပေးစာ
ချစ်သောသားလေး ရဲဝဏ္ဏ.. အခုတလောမှာ ရာသီဥတုက ပူပြင်းတဲ့အပြင်လျှပ်စစ်မီးကပါ ခွဲတမ်းနဲ့ပေး၊ ခွဲတမ်းကလည်း မမှန် ဆိုတော့ သားလေး ချွေးသံတရွှဲရွှဲဖြစ်ပြီး၊ လူးလူးလိမ့်လိမ့်နဲ့ စာကောင်းကောင်း မဖတ်ရ၊ ဂိမ်းမဆော့ရ၊ ပြီးတော့ အိပ်လို့လည်း မပျော်နိုင်တာကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲနေရတယ် မဟုတ်လား။ သားမှမဟုတ်ပါဘူး နိုင်ငံသားအားလုံး သည်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကြောင့် အလုပ်တွေ နှောင့်နှေး၊ အပူဒဏ်ကာကွယ်ဖို့ကလည်း လေအေးပေးစက်၊ ပန်ကာတို့ မဖွင့်နိုင်...အတော့်ကို ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း ခံစားနေရတာပါလေ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အပူဒဏ် (Heatstroke) ခံရ၊ အသက်ဆုံးရတာတွေကို သားလေး အကြိမ်ကြိမ်ကြားမှာပေါ့။ ရာသီဥတုပြင်းထန်ခြင်းဟာ သဘာဝတရားကြီးက ဒဏ်ခတ်လိုက်တာပဲသား..။ သစ်တောသစ်ပင်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားမှတော့ အပူဒဏ်ကို ခါးစီးခံရပြီပေါ့ကွယ်။ သားလေးရေ..သစ်ပင်တွေဆိုတာ ထီးတွေလိုမျိုး အပူဒဏ်ကို ကြားခံ ကာကွယ်ပေးထားတာနော်။ မြေဆီသြဇာကို ထိန်းသိမ်းတာ၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, June 16th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
Abstract-Girl-Face-Illustra သစ်ရိပ်သိုသိပ်တဲ့ စားသောက်ဆိုင် ခြံဝင်းထဲကို မသွင် ကားမောင်းဝင်လာတာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဘဲ။ နီဖျော့ဖျော့ ပွင့်ဖတ်တွေ ခင်းထားတဲ့ စိန်ပန်းပင်ပျိုအောက် ကားထိုးရပ်လိုက်ပုံက သူ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြတယ်။ ကြိုရောက်နှင့်နေတဲ့ မီမီက လက်ပြလိုက်တော့ စားပွဲဝိုင်းကို သွက်သွက် လျှောက်လာတယ်။ Coach နံ့သာရောင် ဘေးလွယ်အိတ်ကို ထိုင်ခုံ အလွတ် တခုပေါ် လှမ်းလိုက်တဲ့ ဟန်က ပေါ့ပါးသွက်လက်တယ်။ ပြီးတော့ သူ ပတ်ထားတဲ့ ကက်ရ်ှမီးယား ခြုံလွှာ အသားရောင်ဖျော့ဖျော့ကို အသာ ဖြုတ်တယ်။ “ အမ နည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။ မီမီရောက်နေတာ ကြာပြီလား။ ထွက်ခါနီးမှကွာ အလုပ်ကမပြတ်တာနဲ့” မီမီက သူရောက်တာ မကြာသေးတဲ့အကြောင်း ပြန်ဖြေတော့ မသွင် ပြုံးတယ်။ သူ့အပြုံး ... Continue Reading
တင်းပြည့် တော်လှန်သူ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးသမားများ (Women Political Citizenship) နှင့် နိုင်ငံရေးပြိုင်ကွင်း ( Political Arena)
Published By Myat Shu On Wednesday, June 13th 2012. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး
သိပ်မထူးဆန်းတဲ့ မေးခွန်းတခု ခေါင်းထဲကို မကြာခဏ ၀င်လာလေ့ရှိမှာပါ၊ အဲဒါက ဘာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေဟာ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုနယ်ပယ်တွေမှာ ကိုယ်စားပြုမှုနည်းပါးကြတာလဲ။ သို့မဟုတ် အဲလို နေရာတွေကို မရနိုင်ကြတာလဲ၊ ရထားတဲ့ နေရာအရေအတွက် ဘာလို့ လျော့နည်းနေသေးတာလဲ၊ ဘာတွေက တားဆီးထားတာလဲ၊ ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့နေရသလဲ၊ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အသုံးမကျမှု၊ အားနည်းမှုကြောင့်လား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း နောက်ဆက်တွဲ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာမှာပါ၊ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်လည်း ကနေ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကျင့်သုံးဆဲ ဖြစ်နေတဲ့ မဟာဖိုဝါဒကဘဲ အဆုံးစွန် ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ၀န်ရိုးကြီးတခုလား ဆိုတာ တွေးတောစရာ ဖြစ်နေတယ်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ် ယူအန်ဒီပီက ထုတ်တဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, June 1st 2012. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
* ကြည့်လိုက်စမ်း --- သူငယ်ချင်း မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းအနှံ၊ တပြန့်တပြော ------ - သောကမီးလျှံကို စားသုံးနေရသူတွေ - မောဟ အမှောင်တိုက်ထဲကျရောက်နေသူတွေ - ၀မ်းတစ်ထွာနဲ့ စစ်ခင်းနေရသူတွေ - ကိုးစရာ ကိုယ့်အား ရှားပါးနေသူတွေ - အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ နတ္ထိဖြစ်နေသူတွေ - တစ်ကိုယ်ရည်ဖော်မဲ့ ချည့်နဲ့နေသူတွေ ……… ခု ဆယ် ရာ ထောင် သောင်း သိန်း သန်း ကုဋ္ဋေ ။ - ငိုသူကို မျက်ရည်သုတ်ပေး - အမှောင်မိသူကို အလင်းပြပေး - ဆာလောင်သူကို အစာပေး - လဲကျသူကို ထူမတ်ပေး - နာဖျားသူကို ဆေးဝါးပေး - အထီးကျန်သူကို အဖော်ပြုပေး ။ * ကူညီဖေးမ နှလုံးသားတွေလှကြရဲ့။ သို့ပေမယ့် ---- သူငယ်ချင်း ရိုးရှင်းစွာ တွေးကြရအောင် ။ * ညောင်ပင်သာ ... Continue Reading